トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Uhlobo indlela yokubhatala of credit esijikelezayo
Esijikelezayo ngetyala, kungakhathaliseki ukuba isixa semali okanye inombolo ukuba usebenzise, ??kodwa kujongwe ukuba uhlawule isixa esithile semali, ukuba iye yabekelwa, indlela yentlawulo kukho iintlobo ezininzi. Xa isicelo ikhadi, ixesha lokusetyenziswa, nayo ngoku okhethiweyo emva kokusetyenziswa.
uhlobo kobhaliso pre
ribonucleic iqhelekileyo, ngendlela ibizwa ngokuba uhlobo kobhaliso pre olujikelezayo ngetyala, na uhlobo ubhaliswe imboleko olujikelezayo ngexesha lesicelo khadi. Ukumisela isixa sentlawulo yenyanga ngexesha ikhontrakthi ikhadi, lidlula nesixa ngcaciso imali liya kuqhubeka lihlawula kwiinyanga ezilandelayo. Le Nkonzo ithe yaziswa kwi kwinkampani enkulu ngetyala. Ukuba ukusebenzisa imali engaphantsi kwe-200,000 yen, le notsalo singasongwa zicaciswe ukususela 5000 yen, ungakhankanya ukuya ku 100,000 yen. Ukuba ushiya ukhetha le ndlela yentlawulo, enoba ukhankanye ixesha-1 intlawulo ngexesha shopping kuyo ziza kugqitywa ngokuzenzekela kutshintshwa kwi ajikelezayo ngetyala.
nabo kamva, kumaziko kwiminyaka yakutshanje inkampani ngetyala yaqaliswa, kukho kwakhona uhlobo intlawulo a oko kubizwa ngokuba "ribonucleic kamva". Oku emva kokuba shopping yindlela ukutshintsha ngetyala olujikelezayo wacela kwinkampani yamatyala ngefowuni okanye ngeInternet. Yokusebenzisa shopping, ekubeni kunokwenzeka ukutshintsha ezabo kuphela oko ufuna ukuboleka esijikelezayo, unako encedisayo ukuyisebenzisa. Kwiinkqubo ukuba iinkampani ezinkulu ziye zaziswa, ukuze futhi ukusebenzisa igama ukusetyenziswa emva kokuba uhlobo utshintsho olujikelezayo ngetyala, kodwa yonke enye.
olujikelezayo umsebenzi credit card
Ukongeza, uninzi ikhadi lamatyala ngokubanzi olujikelezayo umsebenzi letyala ezingalindelekanga, nokuba umntu lowo kwimvumelwano ezayo kwinyanga esisixa, iye ukuba ukwazi ukukhetha ityala olujikelezayo evenkileni kuwe. indlela yentlawulo ebizwa phezu-the-counter olujikelezayo ngetyala, ngexesha ezivenkileni kwi abarhwebi kunye nokuphathwa olujikelezayo ngetyala, ungakhankanya kwimeko olujikelezayo credit nganye.
Ukuba isaziso ngexesha lokusetyenziswa khadi "kwi credit olujikelezayo", kwaye indleko olisebenzisileyo shopping xa ajikelezayo ngetyala. Kodwa kukho kwakhona ukuba inkqubo ka ezifana ecacisa inani intlawulo yenyanga imali iyafuneka, ngenxa yokuba kukho indibano kwinkampani ngecredit card ngalinye, isiqinisekiso Ungafuna ukugcina.
reference | olujikelezayo ngetyala umsebenzi ikhadi odumileyo kude uluhlu
olujikelezayo ngetyala-kuphela card
Kwakhona, ukuba ngabo inkampani yaqala ukuthengisa kwiminyaka yakutshanje, kukho into ekuthiwa ikhadi ribonucleic abazinikeleyo. Xa ikhadi onceda abantu ngetyala esijikelezayo, loo nto ayinakusetyenziswa ngaphandle ngokuhlawula ribonucleic elikhankanyiweyo ngexesha lesivumelwano. Okanye isixa ngenyanga lump ezayo kuthengela nganye, awukwazi ukutshintsha ukuba okanye ajikelezayo ngetyala.
Ukuba ngenyanga na isigqibo imali ezakusetyenziswa kweli khadi, mhlawumbi kuza kufuneka ukuba ukudala ikhadi ukuba unako ukuhlawula ribonucleic. Uninzi credit card, nokuba isivumelwano kwi ezayo kwinyanga esisixa, unako ukutshintsha credit esijikelezayo. Nantsi indlela yokuyenza, iyafumaneka kwi umnatha ngaphandle phezu-the-counter. Ukongeza, unako kwakhona ukutshintsha ucingo ku inkxaso kubathengi. Ukongeza, okanye olujikelezayo ngetyala ukuthenga nganye, kufuneka ukwazi ukuba oku okanye ucacise kwinyanga ezayo esisixa-mali yentlawulo.
Unga kwakhona ucacise ixesha kuphela olujikelezayo ngetyala ukuba shopping eninzi ithuba lonyaka. Ngaphezu koko, uye waba ukuvumela yombane kuninzi khadi.
reference | kwimeko yomsebenzi elikhulu olujikelezayo ngetyala-kuphela ikhadi odumileyo kude Uluhlu
ebomini bakho kunye nokutshintsha izimvo zemigaqo yabantu
salary ukusebenzisa ngokungqinelana neshedyuli yenkcitho, imali kunokuba ngaphantsi xa iintlawulo zenyanga indlela kusengaphambili elikhankanyiweyo, unako ukuba uhlawule ngaphambi ishedyuli ukuhlawula eninzi ngenyanga. Esijikelezayo ikhredithi kuxhomekeke kusetyenziso, kuba sisixhobo enokunceda ebomini. .
salary ukusebenzisa ngokungqinelana neshedyuli yenkcitho, imali kunokuba ngaphantsi xa iintlawulo zenyanga indlela kusengaphambili elikhankanyiweyo, unako ukuba uhlawule ngaphambi ishedyuli ukuhlawula eninzi ngenyanga. Esijikelezayo ikhredithi kuxhomekeke kusetyenziso, kuba sisixhobo enokunceda ebomini. Ukhankanye isixa ngeentlawulo ngenyanga, unako ukuba uhlawule ngaphambi ishedyuli ukuhlawula eninzi ngenyanga. Esijikelezayo ikhredithi kuxhomekeke kusetyenziso, kuba sisixhobo enokunceda ebomini. Ukhankanye isixa ngeentlawulo ngenyanga, unako ukuba uhlawule ngaphambi ishedyuli ukuhlawula eninzi ngenyanga. Esijikelezayo ikhredithi kuxhomekeke kusetyenziso, kuba sisixhobo enokunceda ebomini.